Bobabili amantombazane nabesifazane bakhetha ukugqoka izinwele zabo nge-henna, ngoba bayibheka njengombala ongenabungozi kakhulu. Kodwa-ke, i-henna, ngokungafani nanoma yimuphi omunye upende, ayikwazi ukunyamalala ngokuphelele futhi ihlanzeke kalula, ngakho-ke abachwepheshe bezinwele zokunakekelwa ngokumelene nembala enombala enjalo. Uma kunesidingo sokubala umbala wezinwele otholakala ekugayeni nge-henna, bese ulandela inqubo, linda cishe izinyanga ezintathu kuze kube yilapho isisekelo sageza okungenani kancane. Uma unquma ukugqoka izinwele zakho ekuqaleni kombala ohlukile, khona-ke kukhona ithuba lokuthi umbala awuhambisani nawe. Isibonelo, ingaba luhlaza noma lucebile nge-orange. Ngisho nangemva kokudweba i-henna enemibala emnyama, ukuhlolwa okunjalo kungaba isimanga.
Kodwa zikhona ezinye izindlela ezilula ezizosiza ukuhlanza i-henna ezinyaweni kungenzeka.
Ukudweba nge-mask amafutha
Le ndlela ayikhiphi kuphela ukwedlulela ngokweqile kwe-henna kusuka ezinyaweni, kodwa izophinde iphulukise izinwele futhi yondle. Kule maski, noma yimaphi amafutha ezinwele, ungathatha umnqumo, i-burdock, i-linseed, i-castor noma enye. Kumele kube nokushisa emanzini okugezela futhi kusetshenziswe kuwo onke amazinyo kanye nobude bonke. Le mask kufanele igcinwe cishe imizuzu engama-40 futhi igezwe nge-shampoo yezinwele ezinamafutha. Izinzuzo zamafutha zikhulu. Isibonelo, ungaphilisa ukuphela kwehlukaniso, uqinise izinwele futhi, ekugcineni, banezakhi zokudla okunomsoco.
Ngemuva kwenqubo enjalo, kunconywa ukuthi ugeze izinwele ngamanzi ashisayo noma uphathe utshwala ngamaphesenti angu-70. Kunconywa ukufudumala imaski ngomoya ofudumele we-dryer wezinwele. Emva kokuhlanza imaski, kuyadingeka ukuba usule kahle ikhanda nge-shampoo.
Ukhilimu omuncu noma i-kefir mask
I-mask enjalo ayikho indawo elula ukuyenza. Kubalulekile ukusebenzisa ukhilimu omuncu noma i-yogurt kukho konke ubude bezinwele bese ubamba cishe ihora ekhanda. Bese ugeza.
Ngokusekelwe ku-kefir, ungalungisa imaski ngokuqukethwe kwemvubelo. Ngokuba ingilazi eyodwa ye-kefir iyancipha ngamagremu angu-40 emvubelo. Le mask kufanele igcinwe cishe amahora amabili ngezinwele.
Ama-masks kufanele asetshenziswe nsuku zonke kuze kufike i-henna, ngesidingo sokumboza ikhanda nge-polyethylene ngemuva kokusebenzisa imaski.
Ama-rinsers aneviniga nejusi lemon
Ungasusa izinwele zakho ngamanzi acidikhi ngokufaka uviniga. Ukuze uhlaziye isisombululo, engeza izipuni ezine zeviniga emgodini wamanzi. Kubalulekile ukugcina izinwele emanzini anjalo cishe imizuzu engu-15. Khona-ke kubalulekile ukugeza ngokugcwele nge-balm kanye ne-shampoo. Ungafaka uviniga ngejamu lemon. Kodwa ungakwazi nje ukubeka ekhanda lakho bese ubamba cishe ihora. Bese ugeza nge-shampoo kanye ne-balm.
Ungazama "ukugeza" izinwele zakho. Isibonelo, sebenzisa insipho noma i-powder yokugeza. Lezi zimali ziqeda izikwele zezinwele. Kubalulekile ukugubha izinwele nge powder noma insipho bese ugeza, bese wenza imaski edingekayo. Le nqubo kufanele yenziwe nsuku zonke kuze kube yilapho ihlanjululwa khona izinwele.
Ungazama futhi ukulungisa imaski esekelwe uju, ubisi kanye nemayonnaise.
Uma kungekho okusizayo, ke ungasebenzisa ukugeza okhethekile kokupenda, okungcono uma kungokwemvelo. Izinsalela zijulile futhi zingenasisekelo. Kodwa njengezo zonke amakhemikhali, zilimaza izinwele. Ngakho-ke kubalulekile ukwenza imaski enomsoco enomsoco ngezinwele ngemuva kokufaka ukugeza.
I-Henna inconywa ukuthi igeze leyo eyayisetshenziswe kamuva nje, kodwa uma sekudlule amasonto angaphezu kwamabili, akusizi ngalutho ukugeza, kusalinda ukulinda ize ivele yodwa. Kuthatha cishe izinyanga ezintathu, kodwa kungcono ukulinda ngaphezulu.
Uma kukhona isifiso sokuba i-brunette, ke phezu kwe-henna ungasebenzisa i-basma. I-Basma - lokhu kuyigugu lemvelo, ngaphezu kwalokho, kuzoqinisa izinwele bese kubanika ukukhanya nokukhanya.
Amasks okugcoba izinwele ekhaya
Indlela yokwenza uhlaka lwezinwele
Ubuchwepheshe bezinwele zaseFrance
I-cocktail ne-ananasini ne-rum
U-Anna Kalashnikova waphonseka mayelana nokukhulelwa okwesithathu ku-Alexei Panin, ividiyo
Iresiphi yeKhan Masala
Imiphumela yemibuzo evela ku- "Söstry Mamoutine"
Ukuhambisana kokuhlolwa kokubili
Ihamba ngokugcwalisa umasipha okhilimu
Khulisa inja kusuka enja
Umdala omnyama nokusetshenziswa kwayo emithini yomuthi